Indiagbọ elu ụgbọ elu nke India: Madrid, Milan, Copenhagen, Vienna, Stockholm
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Indiagbọ elu ụgbọ elu nke India: Madrid, Milan, Copenhagen, Vienna, Stockholm
Airlines • Austria na -agbasa ozi ọma • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Denmark na -agbasa akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • India na -agbasa ozi ọma • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Air India na-akwụsị ụgbọ elu
Air India kwupụtara na ọ ga-akwụsị ụgbọ elu ọ dịkarịa ala ebe 5 Europe n'ihi ọdịda nke ndị njem chọrọ maka ebe ndị a. The ụgbọelu mba na-ehota na ndị a ụzọ gasị na-aba na ego viable n'ihi nke mmetụta nke ọrịa na-efe efe COVID-19 coronavirus.
N'ebe mgbutu osisi ahụ bụ obodo Madrid, Milan, Copenhagen, Vienna, na Stockholm na-arụ ọrụ ozugbo.
Na nkwupụta dị n'ime ya nke Ngalaba Azụmaahịa nke Air India dere, ọ na-agụ, sị: "N'ihi ọnọdụ COVID, ndị ikike tozuru oke akwadola ya imechi ụlọ ọrụ ndị na-esote wee pụọ n'ịntanetị."
"A ga-echeta IBO ugbu a (ọfịs ntinye akwụkwọ mba ofesi) na India, a ga-enyefe ọdụ ahụ n'aka GSA (onye na-ere ahịa n'ozuzu) mgbe emechara usoro mmechi," ihe ndekọ ahụ gara n'ihu ịgbakwunye.
IATA (International Air Transport Association) na amụma ya na July kwuru na njem ụgbọ njem ụwa (njem njem njem kilomita ma ọ bụ RPKs) agaghị alaghachi na ọkwa pre-Covid-19 ruo 2024, otu afọ mgbe e mesịrị karịa atụmatụ mbụ.
Na mgbakwunye, IATA kwuru na n'afọ 2020, a na-atụ anya na ọnụọgụ ndị njem mba ụwa ga-agbada site na pasent 55 ma e jiri ya tụnyere 2019. Nke a bụ amụma edegharịrị site na nke ọnwa Eprel mgbe IATA buru amụma na ọnụọgụ ndị njem mba ụwa nwere ike ịdalata site na 46 pasent afọ.
Ndị njem gaara akwụkwọ njem na Air India gaa Madrid, Milan, Copenhagen, Vienna, na Stockholm kwesịrị lelee onye na-ahụ maka mba banyere nkwụghachi.
Air India na-arụ ọrụ ụgbọ elu gaa ebe 103 gburugburu ụwa yana ọrụ mba ụwa na obodo 45 na mba 31 na ụgbọ elu ụlọ na obodo 58. Airgbọ elu ahụ na-arụ ọrụ Boeing 737 Dreamliner, Boeing 777-200LRm Boeing 747-400, Boeing 777-300ER, Airbus A320-214 CEO, Airbus A320-214 CEO, Airbus A320-251 NEO, Airbus A321, Airbus A319, Airbus A319, ATR 42-320, na ATR 72-600.
Airlineslọ ọrụ ụgbọ elu nke Etiopia na-amalite ọrụ ụgbọ elu ...